Imisebenzi kaSteve yayilungile. I-adobe iphelisa inkxaso ye-flash
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo USteve Jobs wayenelungelo. I-Adobe iphelisa inkxaso yeFlash
USteve Jobs wayenelungelo. I-Adobe iphelisa inkxaso yeFlash
Uyakhumbula ukuba umva ngoFebruwari 2010, uSteve Jobs wayetyelele uluntu apile I-iPad kunye nokuphendula umbuzo ovela kwintatheli, Ucacisile ukuba kutheni i-iPhone kunye ne-iPad bengenayo iAdobe Flash efakiweyo . Elokugqibela liqonga lemultimedia elisetyenziselwa oopopayi. Iintengiso kunye nemidlalo yevidiyo ebaleka kwiFlash ayizukuvela nakwisiphi na isixhobo kunye ne-Apple & apos; s eyi-CEO ekubhekiswe kuyo njenge 'CPU hog.' Uye wayibiza 'nge-buggy' kwaye igcwele ii & apos; imingxunya yokhuseleko. ' Kwakunokucoca ibhetri xa iApple yayivavanya kwi-iPad. Kwinyanga ephelileyo, imisebenzi yahlasela iAdobe ngexesha leseshoni ye-Q & A yeHolo yaseKapa yabasebenzi be-Apple. Imisebenzi yatsho ngexesha lomsitho Amaxesha anqabileyo aphambana neMac, ihlala ibangelwa yiFlash .
Ayikuko ukuba isigebenga asikwazanga ukufikelela kwisigqoko sayo somlingo kwaye sikhuphe i-iPhone eqhuba iAdobe Flash. Ividiyo enjalo yabonakala ngoJuni 2010 Ibonisa into eyayibizwa ngokuba zii & apos; awona manqanaba okuqala 'eFlash egqogqiwe kwi-handset ye-iOS. Kodwa zonke izinto ezingalunganga ezikhankanywe yimisebenzi, iincukuthu, idreyini yebhetri, kunye nokusilela kwemicimbi yezokhuseleko ngekhe kuphele ngomlingo.
uphando Kwelinye icala, yamkela iAdobe Flash kwi-Android ecosystem njengomahluko xa kuthelekiswa ne-iOS. I-Motorola DROID kunye ne-Nexus One zimbini zeefowuni ze-Android ezafumana iFlash . Ngelixa iFlash yeselfowuni ivumela iintengiso ezinobomi kunye nemidlalo ethile yevidiyo ukuba iqhubeke kwisikhangeli, ibicotha kwaye iyikhuphile ibhetri kwiimodeli eziyifakileyo. Kodwa nabalandeli be-Android kwafuneka bavumelane nezimvo zikaSteve Jobs malunga neFlash kunye Ekugqibeleni i-Adobe yatsala iplagi kwinkxaso yenguqulo yeselfowuni yesoftware.
Izolo ibingengomhla wokugqibela we-2020 kuphela, ibilusuku lokugqibela ukuba iAdobe ixhase iFlash Player . Kwaye emva komhla kaJanuwari 12 ka-2021, umxholo weFlash uya kuvalwa ekusebenzeni kwi-plug-in. Kwaye njengoko kuvela, uSteve Jobs wayelungile ngomnxeba wakhe wokuba i-HTML5 ithathe indawo yeFlash. Oko kwaqala ngo-2015 xa ii -apps ezinje nge-YouTube zithathe indawo yeFlash nge-HTML5. Idesktop ebekade ibekiwe kunye nenguqulelo yeselfowuni yeqonga ngoku ihambile kunye nesibane.
Ungasitshintsha njani isandi somthunywa
moto z vs iphone 6s
Umlindi & apos; Umhla wezaphulelo zomkhosi kwiifowuni kunye nezicwangciso zedatha ezingenamda
Makubekho i-hue: ezintlanu zezona zilungileyo ze-LED zokutshintsha umbala kwiVenkile yokudlala
Isoftware yoPhuculo lweSoftware-SDLC
Kutheni iifowuni ze-LG zingathandwa njengokuba zazinjalo ngaphambili?
I-Samsung Galaxy S7 vs LG G5 ukuthelekiswa kwekhamera engaboniyo: vota apha
Kubonakala ngathi iiyunithi ze-iPhone 7 kwiVerizon zihlangabezana neengxaki zonxibelelwano ze-LTE
I-mini-LED ye-iPad Pro entsha iya kubiza i-699 yeedola ukulungisa ngaphandle kwe-AppleCare +
Amava e-Galaxy Z Fold 2: Nazi iiapos zendlela ezijongeka ngayo iividiyo, imidlalo edlalayo, nokunye okuninzi!
I-T-Mobile inomvuzo kwakhona enye ibhetshi yabathengi bexesha elide ngeyona nto ibalaseleyo
Uyifumana njani inombolo yefowuni ye-IMEI